भिडियो अभिलेखालयबाट — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो भिडियो
उदय बुक बारे के छ?
आफ्नो नयाँ पुस्तक के छ मान्छे यात्रा आग्रह गरेका छन्. यहाँ त्यो छोटकरीमा कुरा छ. तपाईं Risebook.tv मा किताबको बारेमा थप सिक्न सक्छौं
तपाईं राम्रो जीवन बाँचिरहेका छौं?
यो वर्षको सुरुमा म मेरो नयाँ पुस्तक भ्रमणमा गए, असल जीवन. प्रत्येक रात, म प्रश्नको जवाफ प्रयास गर्ने एक भाषण दिनुभयो, "के यो राम्रो जीवन बिताउन मतलब?” कुराकानीानोगा मा, तमिलनाडु, हामी सन्देश रेकर्ड र म माथि यो पोष्ट गर्नुभएको. अक्टोबर मा जारी पुस्तक 1, 2012 र तपाईं यसलाई खरीद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. पुस्तक बारेमा थप जान्न तपाईं क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. तपाईं राम्रो जीवन एल्बम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ. तपाईं राम्रो जीवन बाँचिरहेका छौं?
एक सोह्र भिडियो
मेरो पुस्तकको विमोचन को उत्सव मा, असल जीवन, यहाँ "एक सोह्र लागि आधिकारिक भिडियो,” मेरो नवीनतम एल्बम बाट, पनि भनिन्छ असल जीवन.
असल जीवन मिनी वृत्तचित्र
उहाँले आफ्नो नवीनतम एल्बम बनाउने प्रक्रियामा Highs र lows छलफल रूपमा यात्रा ली संग दृष्य पछि एक नजर “असल जीवन।”
यो नजन्मेको को सुन्दर जीवन
"सुन्दर जीवन मा ली यात्रा” बाट इच्छा परमेश्वरले मा Vimeo.
पहिलो गीत म मेरो हालैको एल्बमका लागि लेखे, “असल जीवन” "सुन्दर जीवन भनिन्छ गीत थियो।” इच्छा परमेश्वरले मलाई त्यो गीत र मेरो हृदय यसलाई पछि बारेमा सोधे. यहाँ आफ्नो छ सम्पूर्ण ब्लग पोस्ट.
र यहाँ गीत गीत को हो, जो वी विशेषताहरु. गुलाफ:
सुन्दर जीवन भित्र
स्थानान्तरण सास जीवित
त्यसैले आशा आऊ गरौं
परमेश्वरको उहाँले के गर्दै थियो थाह थियो
जब उहाँले दिनुभयो
सुन्दर सुन्दर जीवन
प्रिय बहिनी, म ठाँउ तपाईं मा सुन्न
मलाई थाहा यो केही सजिलो पल्ट कि मार्फत रहेको छ
तपाईंको गर्भमा बच्चा छ, तर तपाईं प्रयास त्यसो गरिएन
तपाईं यो सबै फिर्ता थाह यदि लिन चाहन्छु, तर तपाईं एक सुराग छैन छैन भनेर
आफ्नो प्रेमी संग समय, कि लेट रात
के तपाईं प्रेम बनाउने थियो लाग्यो जब, तपाईं जीवन बनाउन भनेर
र अब यो अन्याय महसुस गर्नुपर्छ, मानिस यसलाई मन छ
तपाईं एक जीवन पायो छैन, गोली, यो समय साँच्चै छैन सही छ
छैन एकदम म आफ्नो पीडा बुझ्न तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ
तर मलाई थाहा तपाईं निराश र लज्जित महसुस हुँदैन
र मलाई थाहा आफ्नो पेट मा बच्चाहरु एक खेल छैन
उहाँले एक दिल को धडकन पायो गर्नुपर्छ, उहाँले बढ्न पल्ट छ…
म कथाहरू बारेमा सोच द्वारा शुरू गर्न चाहनुहुन्छ. समय को शुरुवात देखि त्यहाँ हाम्रो कथाहरू मार्फत चलाउन भनेर केही साधारण विषयवस्तुहरू छन्. हामी प्रेम कथाहरू छ, हास्य, र विपत्ति आइलाग्यो - वा सबैलाई एक मा रोमान्टिक कमेडी रूपमा चिनिने को मिश्रण. तर मार्फत ती सबै चलचित्र को प्रकार, लगभग सधैं देखाउनका दुई विषयवस्तुहरू छन्: राम्रो र खराब.
आफ्नो मनपर्ने चलचित्र बारेमा सोच्नुहोस्. Braveheart मा, स्कटल्याण्ड र विलियम वालेस राम्रो हो, इङ्गल्याण्ड र राजा एडवर्ड खराब हुँदा. Narnia को इतिहास मा बच्चाहरु र Aslan राम्रो हो, र चुडैल खराब छ. पनि डिज्नी चलचित्र मा, यो सत्य हो. अलादीन मा, अलादीन र जिन्न राम्रो हो, तर Jafar खराब छ. जस्तै तपाईं अलादीन बारेमा थाहा छैन कार्य छैन.
तपाईं सधैं राम्रो पक्ष जीत गर्न चाहनुहुन्छ र अधिकांश समय उनि.
त्यसैले जब हामी येशूको बारेमा कुरा गर्न सुरु र हामी परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्न थाल्दा कहिलेकाहीं एउटै विभाग मा विचार. तिनीहरूले परमेश्वर र शैतानको बीचमा एक कस्मिक युद्धमा रूपमा ब्रह्माण्डको लाग्छ. र हाम्रो मनपर्ने कथाहरू सबै जस्तै, हामी जो जीत हेर्न अन्त आशंका गर्दै हुनुहुन्छ. येशू केवल एक…
यहाँ र्याले मा शिखर सम्मेलन चर्च मा मेरो हाल प्रवचन देखि भिडियोको, कांग्रेस. म मार्क मा प्रचार 5:1-20 शक्ति बारे, अख्तियार, र येशूको कृपा. म यो तपाईं एउटा प्रोत्साहन आशा
कहिल्यै मेरो गीत "चढाइ भिडियो देखेका छौँ जसले तपाईंलाई ती लागि (नायक)” यहाँ छ. आनन्द लिनुहोस्! मलाई आशा छ यो आफ्नो आँखा ख्रीष्टमा राख्न तपाईं मद्दत गर्छ.
सुसमाचार गठबन्धन भिडियो
एरिक मेसन हाल सुसमाचारको गठबन्धन भिडियो, Lecrae, र मलाई कालो मान्छे छलफल र “सुधार” धर्मशास्त्र